Sinnaanta Helitaanka Caalamiga ah - Ku saabsan
EAI waxay ka caawineysaa bulshooyinka adduunka inay kaxeeyaan isbadal waara oo isbadal leh
Iyada oo loo marayo hannaankeena kaqaybgalka warbaahinta, teknolojiyada, iyo hannaan gaarsiinta. Qaabaynta
xallinta jaalliyadaha, barnaamijkeenna waa mid leh degenaansho iyo dhaqan ahaan. Anaga
dhisaan hab-dhaqanka isgaarsiinta ee xididka u roonaada, u abuura meelo-sare oo sare u qaada
codadka la yareeyay, oo la dhiso dhaqdhaqaaq maxali ah oo hogaaminaya taas oo wareejisa awooda, oo dhiirigelinaysa caadi
beddel oo dhiirrigelin hal abuur, togan, iyo xalal hal abuur leh arrimaha bulshada.
Adoo ka dhigaya dadka sheekooyinka dhabta ah iyo riyooyinkooda xudunta barnaamijyadeena, jaaliyadaha iyo bulshada oo dhan waxay ka beddelaan sheekooyinkooda awood-darro iyo kala fogeyn illaa awood iyo suurtagal.	 Ronni Goldfarb
Aasaasaha EAI iyo xubin ka tirsan guddiga
Taariikhdeena: Horudhaca Horumarinta Caalamiga ah ee Aadanaha
Sanadkii 2000, Ronni Goldfarb wuxuu lahaa aragti. Iyada oo horumar degdeg ah laga gaadhay macluumaadka teknolojiyadda macluumaadka iyo teknoolojiyadda is-gaadhsiinta (ICTs) iyo aaminaad qoto dheer oo ku saabsan awoodda shaqsiga saameyn ku leh isbeddelka, iyada iyo koox yar ayaa billaabey Isku-xirka Helitaanka Caalamiga ah. EAI wuxuu ku dhashay ka go'naanshaha kobcinta horumarka aadanaha iyo xoojinta saxda ah ee loo maro mabaadiida xuquuqda aadanaha ee caalamiga ah - dhegeysiga, u damqashada, ixtiraamka, sharafta, barashada, hal abuurka, iyo sheeko xariirka.
Maalgalinta ka socota Ford iyo UN Foundations ayaa suurta galiyay in la bilaabo barnaamijyada calamiga ah ee ururka. Waxay wax ka qabteen ka hortagga HIV / AIDS iyo awoodsiinta haweenka ee Nepal iyo barnaamijyada bulshada iyo waxbarashada iyada oo loo marayo dayax gacmeed loo diro 7,000 bulshooyinka reer miyiga ah ee ku baahsan Afghanistan. Shaqada horudhaca ah ee EAI ee isku-darka is-beddelka dhaqanka bulshada (SBCC) iyo ka-qaybgalka bulshada waxay naga kasbadeen Abaal-marinta caanka ah ee Teknolojiyadda '2003' ee xalka wax ku oolka ah ee Nepal, iyadoo la xaqiijinayo in qaabkeennu ahaa mid hal-abuur leh oo qaddar u diyaar ah.
Markuu hogaaminayay Ronni, EAI wuxuu ku fiday iyo guud ahaan tobanka dal ee Aasiya iyo Afrika. Ururka wuxuu ka shaqeeyay xoojinta haweenka iyo gabdhaha iyo sidii looga hortagi lahaa rabshadaha ka dhanka ah. Waxay taageertay barashada malaayiin dhalinyaro ah oo la faquuqay oo leh xirfado nololeed iyo tababaro qaab nololeed ah iyo hormarinta u horseedidda dhisidda nabadda ee qaar ka mid ah gobollada ugu adag adduunka.
Hal-abuurnimo Halis ah: Abuurid Xarumo Xiiso Leh
Sannadkii 2014, EAI waxay soo saartay telefishanka telefishanka dayax-gacmeedka 24/7 ee adduunka ugu horreeya iyo kan keliya ee af-Ingiriisiga ka xor ah. Waxaa soo saaray oo loogu talagalay waqooyiga Nigeriya, AREWA24 (www.arewa24.com) waxay bixisaa barnaamijyo awood siiya dhalinyarada, waxbarida caruurta, taageerta haweenka iyo gabdhaha, kor uqaada nabada, iyo u dabaaldega dhaqanka kala duwan iyo taariikhda waqooyiga Nigeria. Sanadkii 2017, AREWA24 waxay si buuxda u qarsoon tahay, xaqiijisay maal-gashade hogamiyeyaal ah, waxayna ku shaqeysaa dakhliyada la kasbaday.
Awards: EAI waxay heshay abaalmarino badan, oo ay ku jiraan Abaalmarinta Teknolojiyadda NASDAQ ee Madxafka Tech Tech for Innovation ee San Jose, California; Hal abaalmarin Saxaafadda Adduunka ah oo loogu talagalay Mashruuca Codadka ee wax ka qabanaya is-rasaaseynta u dhexeysa haweenka iyo HIV / AIDS, iyo abaalmarinta sharafta leh ee Microsoft ee lagu bixiyo Matxafka Farsamada ee Hal-abuurnimada sannadka 2016.
2018, EAI waxay diyaar u ahayd ballaarinteeda xigta ee xigta. 18 sano kadib, dhagaystayaasha warfaafinta ee hay'addu waxay dhaafeen 200 milyan oo qof oo ay weheliyaan in kabadan 75 milyan oo daawadayaal joogto ah, iyo dhagaystayaal, iyo in kabadan 118,000 oo qof oo si toos ah ugu hawlan howlaha bulshada iyagoo u maraya barnaamijyo saamayn sare leh. Markii ugu sarreysay, Ronni waxay u dooratay inay ka sii wareegto EAI iyadoo sii wadaysa dadaalkeeda iyadoo u adeegaysa Golaha Maamulka iyo lataliye sare.
Mudane Byron Radcliffe wuxuu la wareegay xilka madaxweynaha iyo agaasimaha guud si uu EAI ugu hogaamiyo wajigeeda xiga ee koritaanka. Si loo hubiyo in EAI ay sii wado inay noqoto mid tartan iyo saameyn ku leh horumarka caalamiga ah, waxaan ka soo wareejinay xarunteena San Francisco ilaa Washington, DC Waxaan sidoo kale cusbooneysiinay calaamadeynteena waxaanan dib u laabanay joogitaankeena dhijitaalka ah.
Ugu dambayntii, waxaan ballaadhinay oo aan isku nimaadnay shaqadeenna Galbeedka iyo Bariga Afrika iyo Filibiin. Waxaan hadda ka hawlgalnaa 13 waddan, halkaas oo aan ku sii wadno hirgelinta howlaheena adkaysiga iyo warbaahinta ee warfaafinta, anagoo bulshada u beddelayna waddo nabadeed iyo deganaansho.
Aniga ahaan argagaxisada waxaa sababay maamul xumo ... shaqo la’aanta dhalinyarada waa mid kamid ah sababaha ugu waaweyn ee dhalinyarada ku riixaya xagjirnimada. Xalku waa in la dardar galiyo wadahadal lana xaliyo khilaafaadka.
Saamaynteena & Gaaritaankeena
Tirooyinka Saamaynta & Gaaritaanka * 2019
48 + Kun
Dadku waxay si toos ah uga qaybqaateen nashaadaadka ka qaybgalka bulshada iyo tababbarka
Dhammaan waxyaabaha ku jira waxaa lagu soo saaray luqadaha maxalliga ah
Sinaanta Helitaanka Caalamiga ah waxay ku faraxsan tahay in lala shaqeeyo